कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो: कुन स्थानीय तहमा कसले जिते ? (सूचीसहित) - khabarbox.com.npkhabarbox.com.np
Home » राजनीति » कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो: कुन स्थानीय तहमा कसले जिते ? (सूचीसहित)
Posted On 8:22 am Author siteadmin Category राजनीति.
२ जेठ, काठमाडौं । बैशाख ३१ गते सम्पन्न प्रथम चरणको चुनावको अन्तिम परिणाम धमाधम आउन थालेको छ । २३ स्थानीय तहको नतिजा हेर्दा कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो स्थानमा विजेता बनेका छन् ।
२३ स्थानीय तहमध्ये नेपाली कांग्रेसले ९ स्थानमा जित हात पारेको छ भने एमालेले ७ स्थानमा जितेको छ ।
त्यस्तै माओवादी अहिलेसम्म ६ स्थानमा जितेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारले एउटा स्थानीय तहको अध्यक्षमा जितेका छन् ।
मतगणना असाध्यै ढिलो भए पनि मंगलबार बिहानदेखि विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाको परिणाम आउने क्रम सुरु भएको छ । मंगलबार बिहान साढे ११ बजेसम्मको नतिजा अनुसार देशभरिका २३ वटा स्थानीय तहमा मतगणना सकिएको हो ।
हालसम्मको नतिजा यस्तो छ-
कुशे गाउँपालिका, जाजरकोट
बुङदीकाली गाउँपालिका, नवलपरासी
नार्फु गाउँपालिका, मनाङ
एमालेले जितेका स्थानीय तह:
शे–फोक्शुण्डो गाउँपालिका, डोल्पा
ठूली भेरी नगरपालिका, डोल्पा
घरपझोङ गाउँपालिका, मनाङ
माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय तह:
गुठचौर गाउँपालिका, जुम्ला
सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका कालिकोट
स्वतन्त्रले जितेको स्थानीय तह:
तेञ्जोङ छिरिङ, मुस्ताङ
कहाँ कसले कति मत ल्याए ?
नवलपरासीको बुङ्दिकाली गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका दुर्गाबहादुर राना विजयी भएका छन् । उनले ३ हजार १९१ मत पाएका छन् । यसैगरी उपाध्यक्षमा एमालेकी डिलकुमारी सारुमगर ३ हजार १ मतहित विजयी भएकी छन् ।
मनाङको नार्फू गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका मिङ्मा छिरिङ लामा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
मनाङको नाशोङ गाउँपालिका अध्यक्षमा पनि कांग्रेसका चन्द्र घले निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै कोमलमाया गुरुङ विजयी भएका छन् ।
मुस्ताङको लोमानथाङ गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका सुवर्णकुमार विष्ट ६०३ मतसहित विजयी भएका छन् ।
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका बुद्धि शेरचन ७२८ मतसहित विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै बालकुमारी शेरचन ७२४ मतसहित विजयी भएकी छन् ।
मुस्ताङको बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका फेन्चोकछेसे गुरुङ विजयी भएका छन् । गुरुङले ६५४ मत पाएका छन् ।
बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका जोकलाल बुढा विजयी भएका छन् । उनले २२१९ मत पाएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका सुरेश श्रीपाइलीले १ हजार २६९ मत पाए । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै मानसरी शेरचन २११५ मतसहित निर्वाचित भएकी छन् ।
जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका हरिचन्द्र बस्नेत विजयी भएका छन् ।
दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले बिजय हासिल गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका नगेन्द्रवहादुर मल्ल २ हजार ७८७ मतका साथ विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका मानबहादुर विष्टले २ हजार ६६९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, उपाध्यक्षमा पनि नेपाली कांग्रेसकै सीता ज्ञवाली २ हजार ६२८ मत प्राप्त गरी बिजयी भएकी छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कलावती न्यौपाने २ हजार ६१८ मत प्राप्त गरेर पराजित भएकी छन् ।
जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकामा एमालेका नरेन्द्रकुमार शाही विजयी भएका छन् ।
शाहीले २ हजार ७३ मत पाए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका खड्बहादुर बिसीले १ हजार ८३३ मत प्राप्त गरेका छन् । उपाध्यक्षमा पनि एमालेकै कुमारी थापाले २ हजार ६३ मतका साथ विजय हासिल गरेकी छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी गीताकुमारी शाहीले १ हजार ८१२ मत प्राप्त गरेकी छन् ।
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका आशबहादुर थकाली ४५४ मतसहित विजयी भएका छन् ।
यसैगरी डोल्पाको काइके गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका अंगद राना ९२० मतसहित विजयी भएका छन् ।
यसैगरी एमाले डोल्पाको शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा पनि विजयी भएको छ । शेफोक्सुण्डोमा एमालेका तसी तुण्डुक गुरुङ र उपप्रमुखमा स्वतन्त्रबाट धावा गुरुङ विजयी भएका छन् ।
डोल्पाको ठूलीभेरीमा एमालेका गणेशबहादुर शाही १ हजार ४७३ मतसहित विजयी भएका छन् ।
मनाङको नेश्याङ गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका कान्छा घले विजयी भएका छन् । उनले ६२७ मत पाएका छन् ।
मनाङको चामे गाउँपालिकामा एमालेका लोकेन्द्रबहादुर घले २१४ मत पाएर विजयी भएका छन् । कांग्रेसकी अनिता लामाले १७३ मत पाइन् ।
माओवादीले डोल्पाका दुई, जुम्लाका दुई र कालीकोटको एउटा स्थानीय तह जितेको छ ।
जुम्लाको गुठीचौरमा माओवादीका हरिबहादुर भण्डारी १५९६ मतसहित विजयी भएका छन् । जुम्लाकै हिमा गाउँपालिकामा माओवादीका रजबहादुर शाही १ हजा ३१७ मतसहित विजयी भएका छन् ।
यसैगरी डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा माओवादीका नरसिंह रोकाय विजयी भएका छन् । रोकायले ५५६ मत पाएका छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका दलबहादुर महतराले ५३४ मत पाए ।
उपाध्यक्षमा माओवादीकै अमृता लामा ५५३ मतसहित विजयी भएकी छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी बुद्धकला बोहोराले ४३१ मत पाएकी छन् ।
डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादीका दत्तबहादुर शाही विजयी भएका छन् । शाहीले ९३३ मत पाएका छन् । यसैगरी उपाध्यक्षमा एमालेकी सुविता रोकाय ९५९ मतसहित विजयी भएकी छन् ।
कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका डम्बर शाही विजयी भएका छन् ।
यस्तै रुकुमको सानीभेरी नगरपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका नरबहादुर पुनले ४६५० मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका गोरखबहादुर चन्दले २६४१ ल्याए ।
यस्तै, उपाध्यक्षमा पनि माओवादीकी इन्दिरा वली ४६६१ मत ल्याएर विजयी भएकी छन् भने उनकी प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी पुष्पा वलीले २६०३ मत प्राप्त गरेकी छन् ।